လုပ်ငန်းခွင်မှာ heavy workload တွေကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနည်း (Part- II) | Mycanvas
လုပ်ငန်းခွင်မှာ heavy workload တွေကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနည်း (Part- II)
7. ကျန်းမာသော အလုပ်-ဘဝ ဟန်ချက်ညီမှုကို ထိန်းသိမ်းပါ။
ကျန်းမာသော အလုပ်-ဘဝ ဟန်ချက်ညီမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး လိုချင်တောင့်တသော ချိန်ခွင်သည် အထူးသဖြင့် လေးလံသော အလုပ်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရသောအခါ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အလွန်ကွာခြားပါတယ်။
အလုပ်-ဘဝ ချိန်ခွင်သည် ရုံး၌ဖြစ်စေ အိမ်၌ဖြစ်စေ သင်မည်သည့်နေရာ၌ဖြစ်စေ သင့်ကိုယ်တွင်း၌ ငြိမ်းချမ်းမှုအပြည့်ရှိရန် သင့်ကိုယ်သင် ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာဖွေခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ အရေးကြီးဆုံးအရာကို ရွေးချယ်ပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင်ဟန်ချက်ညီသောဘဝကို ဖန်တီးခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
8. Multitasking ကို ရပ်ပါ။
Multitasking သည် ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်ဦးနှောက်သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် အရာတစ်ခုထက်ပို၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ထိရောက်စွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်သောကြောင့်— အာရုံစူးစိုက်မှုမလိုအပ်သော ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ဦးစားပေးစာရင်းကိုရယူပါ၊ အရေးကြီးဆုံးအရာကို ဦးစွာလုပ်ဆောင်ပါ၊ ထို့နောက်နောက်တစ်ခုသို့ရွှေ့ပါ။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များထွက်ပေါ်ရန် သင်၏စွမ်းအင်ကို ထိန်းထားရန် ပုံမှန်အနားယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
မိနစ် 50 တာရှည်ခံသောပရောဂျက်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် 10 မိနစ်အနားယူပါ။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော သရေစာစားခြင်း သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးနှင့် စကားစမြည်ပြောခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့နောက် နောက်ထပ် မိနစ် ၅၀ ခန့် ပရောဂျက်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီး နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ် အနားယူပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အလုပ်ကနေ ပလပ်ဖြုတ်ဖို့ မိနစ် 30 လောက် အနားယူလိုက်ပါ။ ဤအချိန်သည် သင့်လျော်သောနေ့လည်စာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း အမြန်လုပ်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းလျှောက်ခြင်းအတွက် အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။
အချိန်အနည်းငယ်ယူရုံဖြင့်၊ သင်၏စွမ်းအင်အဆင့်များတက်နေခြင်း၊ သင်၏အလုပ်အရည်အသွေးကောင်းမွန်လာပြီး လောင်ကျွမ်းခံရနိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်သည်။
10. စိတ်အနှောက်အယှက်များ ကင်းဝေးပါစေ။
သင့်တွင် အလုပ်အရမ်းများနေချိန်တွင် ပျမ်းမျှအလုပ်ချိန်အတွင်း သင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အကြိမ်အရေအတွက်ကို ခန့်မှန်းကြည့်ပါ။ ယခု၊ ထိုဂဏန်းကိုယူ၍ 25 ဖြင့် မြှောက်ပါ။ ဂလိုရီယာ မာ့ခ် ၏ လေ့လာမှုတွင် အနှောင့်အယှက်ပေးသော အလုပ်၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို လေ့လာမှုအရ၊ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီးနောက် မူလလုပ်ငန်းသို့ ပြန်သွားရန် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂၃ မိနစ်နှင့် ၁၅ စက္ကန့် ကြာသည်။
စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှုများသည် အာရုံထွေပြားနေချိန်တွင် သင့်အချိန်ကို ယူရုံမျှမက၊ ၎င်းတို့သည် သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကို နှောင့်ယှက်နိုင်ပြီး 25 မိနစ်နီးပါး အာရုံစိုက်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့ကို5ကြိမ်လောက် အာရုံမစိုက်မိဘူးဆိုရင်တော့ ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ရဲ့ တစ်နေ့ကို ၂ နာရီနီးပါးနဲ့ တစ်ပတ်ကို ၁၀ နာရီနီးပါး ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။
11. သေးငယ်သောအလုပ်များသို့ အာရုံစူးစိုက်ထားသောအချိန်ကို ကတိပြုပါ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင်သည် ဤတာဝန်များကို ရိုးရှင်းစွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး ၎င်းတို့ကို အရေးယူရန် လိုအပ်သော်လည်း ပို၍ဖိအားပေးသောအရာတစ်ခု အမြဲရှိနေပါသည်။
သေးငယ်သောအလုပ်များသည် သင်၏အရေးကြီးဆုံးပရောဂျက်များထံ မကြာခဏရောက်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် သင်၏နေ့စဉ်လုပ်စရာများစာရင်းတွင် ထိုင်နေသော်လည်း ပို၍အရေးကြီးသော ဦးစားပေးမှုများကြောင့် သို့မဟုတ် သင့်အတွက် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသောကြောင့် မကြာခဏ မေ့လျော့သွားကြသည်။ သို့သော် သူတို့သည် စိတ်စွမ်းအင်ကိုယူကာ သင့်စိတ်ကို ရှုပ်ပွစေသည်။
သင်လုပ်ရန်စာရင်းတွင်ပါရှိသည့် အလုပ်အသေးစားများအားလုံးကို ပြီးမြောက်စေမည့် တိကျသောအချိန်ကာလတစ်ခုအား ကတိပြုပါ။ ၎င်းသည် သင့်အား စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့် သင်၏ပိုကြီးသောဦးစားပေးမှုများကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန် နေရာပေးလိမ့်မည်။
နေ့တိုင်း မင်းရဲ့အချိန်တွေက ဘယ်ကိုသွားနေလဲ အတိအကျသိလား။ သင့်တွင် အလုပ်အရမ်းများနေချိန်တွင် ပိုမိုကြီးမားသော အခွင့်အလမ်းများကို ထိခိုက်စေရန်အတွက် အချို့သော ပရောဂျက်များနှင့် အလုပ်များတွင် အချိန်အကြာကြီး သုံးစွဲနေပါသလား။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် သင်အသုံးပြုနေသည့်နေရာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အချိန်အနည်းငယ်ပေးပါ။ ဤထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည် သင့်အား အံ့အားသင့်စေမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အချိန်ကိုအာရုံစိုက်သည့်နေရာနှင့် မည်သည့်ပရောဂျက်များကို စတင်ချိန်ညှိရန် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို ပေးမည်ဖြစ်သည်။
စာရွက်တစ်ရွက်ကိုယူပြီး ကော်လံသုံးခုဖန်တီးခြင်းဖြင့် စတင်နိုင်သည်-
ကော်လံ A သည် ဦးစားပေးအလုပ်ဖြစ်သည်။ ကော်လံ B သည် ကောင်းမွန်သော အလုပ်ဖြစ်သည်။ ကော်လံ C သည် တန်ဖိုးနည်းသော အလုပ် သို့မဟုတ် အရာများဖြစ်သည်။
နေ့ရက်တိုင်းတွင် ပရောဂျက် သို့မဟုတ် အလုပ်တစ်ခုနှင့် တစ်ခုစီအတွက် အသုံးပြုသည့်အချိန်တို့ကို ချရေးပါ။ ထိုအချိန်ကို ကော်လံများထဲမှ တစ်ခုသို့ ခွဲဝေပေးပါ။ ရက်သတ္တပတ်၏အဆုံးတွင်၊ ကော်လံတစ်ခုစီတွင်အသုံးပြုသည့်စုစုပေါင်းအချိန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ။
သင်သည် အချို့သောအလုပ်အမျိုးအစားများတွင် အချိန်များစွာဖြုန်းနေပါက၊ သင်အာရုံစိုက်သည့်အချိန်သည် ကော်လံ B နှင့် C တွင်ရှိသောအရာများကို ပြောင်းလဲရန် ကြည့်ပါ။
13. သင့်ယုံကြည်မှုကို ကာကွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ဖိစီးမှုနှင့် ယုံကြည်ချက်မဆုံးရှုံးစေရန် သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်မှုကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
သင့်တွင် နေ့စဉ်ရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ် ယုံကြည်မှုရှိလာသောအခါ၊ သင်သည် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်၊ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလေ့လာရန်၊ မည်သည့်အရာကိုမဆို တုံ့ပြန်ရန်၊ မည်သည့်အရာကိုမဆို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်နှင့် သင်၏အကြီးမားဆုံးအခွင့်အရေးများကို ရရှိရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အနေအထားတွင် ရှိနေပါသည်။
ယုံကြည်မှုက သင့်ကို ကြောက်ရွံ့မှုကို အာရုံစူးစိုက်ပြီး စိတ်အေးလက်အေး တွေးခေါ်မှု၊ ဆက်သွယ်မှု၊ နှင့် လုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကို ပေးသည်။ ဤသည်မှာ လေးလံသော အလုပ်တာဝန်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် သင့်စိတ်ကို ဖြစ်ထွန်းသော အခြေအနေသို့ ထားရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။
Heavy Workload သည်ကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲနိုင်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှု၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့်စိတ်ပျက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
သော့ချက်မှာ ၎င်းကို ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ် ပေါင်းစပ်ခွင့်ပြုမည့်အစား ၎င်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဤအကြံပြုချက်များထဲမှ အနည်းဆုံးတစ်ခုကို သင် အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
အလွန်အကျွံဖြစ်လာပြီး သင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပါက တစ်စုံတစ်ဦးနှင့် စကားပြောရန် အချိန်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ယောက်တည်း ဆက်ဆံပြီး မပျော်မရွှင် ဒေါသတွေနဲ့ မနေနိုင်ဘဲ မနေနိုင်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်မယ့်အစား ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုပါတယ်။
Read Part 1 Here : https://www.facebook.com/mycanvas.mm/posts/1366835067055333